Sargaal Caan oo Dowlada Federaalka oo loiga dilay Dagaalkii.Maanta Bariire | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sargaal Caan oo Dowlada Federaalka oo loiga dilay Dagaalkii.Maanta Bariire
Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa saakay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigyo ciidanka milatariga Soomaaliya ku leeyihiin degmada Owdheegle iyo Deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Weerarka Al Shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidanka xooga Soomaaliyeed ee ku lahaayeen Owdheegle iyo Bariire ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac.
Kabtan Cabdirashiid Banuuji oo katirsanaa saraakiisha aqoonyahanada ee ku jira ciidanka milatariga Soomaaliya ayaana saakay kamid noqday dadkii ku dhintay weerarkii Al Shabaab ku qaadeen xerada Bariire.
Sargaalkan ayaa kamid ahaa aqoonyahanada wax kusoo bartay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Sudan, waxa uuna go’aansaday in uu kamid noqdo ciidanka xooga Soomaaliyeed isagoona ka weecday dhinaca aqoonta uu soo bartay in uu ku shaqeesto.
Weerarka Al Shabaab saakay ku qaadeen saldhigyada ciidanka xooga Soomaaliyeed ku leeyihiin Owdheegle iyo Bariire ayaa waxaa ku dhintay saraakiil iyo ciidamo katirsan labada dhinac ee dagaalamay.
Previous articleKulanka Afasooni Amnigiisa oo la wareegeen Ciidamada Amison
Next articleWararkii ugu danbeeyay doorashada dalka:
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in si dhaw ay ula socdaan Xaaladda Soomaaliya gaar ahaan is marin waaga ka taagan Doorashooyinka & isku dayga dibadbaxa...